Nantsi Oku Khanyayo ngeSpanish
Imigaqo yeSlang iVary by Region
Esi sifundo esiphezulu saseSpain.
Unokuguqulela njani isivakalisi esingentla ngentetho yeSpanish? Khangela igama elithi "lipholile" kwisichazamazwi seSpanish-IsiNgesi, kwaye amathuba okuqala oyifumanayo yi- fresco - kodwa elo lizwi lisetyenziselwa ukubhekisela kwinto engabanda kakhulu. Ezinye iincwadana ezichazileyo ziquka amagama afana ne- guay njengegama elide, kodwa akuyena kuphela igama elingasetyenziswa .
Bueno ingaba luhle
Ukuba ngesizathu esithile kufuneka udlulisele ingcamango "yokupholisa" kwaye ube negama elincinci, unokuhlala usebenzisa igama oye wawaziyo, i- bueno , elithetha "luhle." Akulona lizwi elipholileyo kwaye alifumaneki njengemibonakaliso, kodwa uya kufumana ingcamango yakho yonke.
Kwaye ke, unokuhlala usebenzisa ifom ephezulu , buenísimo , into efanelekileyo kakhulu.
'Ipholile' Amazwi aphethwe nguMmandla
Kukho akukho nto inesiSpain efanelekileyo "epholile" esebenza kuyo yonke indawo, kodwa izikhulumi zaseSpanish ezikhulwini kwiforamu ezixhaswe yilo ndawo zibonelela ngombono wazo kwizinto ezilungileyo. Nayi inxalenye yengxoxo yabo, eyayibanjwe ekuqaleni kwesiSpanish nesiNgesi:
UChabela: Uthi "ukupholisa," ngathi "kupholile!" Yintoni abatsha abayithethayo? Ndiyazi ukuba ayikwazi ukuguqulelwa ngqo, kodwa ...
I-Cyberdiva: Enye igama eliyisebenzisayo liyi- chévere .
I-Duras: Ayikwazi ukuguqulelwa ngokuthe ngqo, kuba ilizwe ngalinye linemibhalo yalo.
UVictorIm: Chévere unomusa wendalo endala (1960s). Ngaba kukho into entsha?
I-Bandini: I- Duras ilungile. Ilizwe ngalinye linalo isigama salo ngamagama anjengale. Igama elithile elikhankanyileyo ( chévere ) livela eVenezuela kodwa ngenxa ye-Venezuela enkulu yokuthumela ngaphandle (i-Spanish sophon operas), igama ngoku liyaziwa kwamanye amazwe athetha iSpanish, kuquka iMexico.
I-Rocer: EMexico siyaqonda igama elithi chévere , kodwa asiyisebenzisi . Kuphela xa sithetha nabantu baseVenezuela okanye baseColombia, ndicinga ukuba.
UAri: Xa ndandifundela eSpeyin i-semester yokugqibela, ndafunda kumhlobo wolwimi othetha isiqhelo ukuba bathi i- guay okanye i- guay guay .
UGuero: Ndicinga ukuba i- chido ne- buena onda ziza kusebenza kakuhle "zipholile."
U-VictorIm: U- Buena onda unomsindo kumdala. Nantoni na ene- onda izandile. Ngaba kukho na amatsha amagama?
Iingxaki: Ndivile i- chido ne- está padre eMexico.
SagittaDei: Inguqulelo eqhelekileyo yinto ebonakalayo , isá genial . Ixhaphake kakhulu kwihlabathi elithetha isiSpanish.
Njengoko kubonisiwe, kukho amagama amaninzi kuxhomekeke kwelizwe. Ndiyisebenzisa i-bacano / a , isá una chimba , es una verraquera kunye nabanye abaninzi; kodwa ezi zi-Colombianisms. Sisebenzisa kwakhona i-anglicism epholile njengoko "in cool ". Abaselula "abatyebi" bathanda ukusebenzisa isiNgesi ngale ndlela. Kuxhomekeke kwinqanaba lezentlalo.
Ngendlela, "eso es chévere " ayichazekanga kangako kunokuba "i- es eseni ", into yangaphambili ifana ne "yinto enhle". Qaphela ukuba ungasebenzisa i- estar okanye usebenze ngokwahlukileyo ngokucacileyo kweempawu zobomi kunye nezicatshulwa.
I-Tottefins: E-Mexico bathi i- padre okanye i- chido ezitalatweni. Nangona kunjalo, kumabonwakude aseMexico athetha ukuqonda .
I-Maletadesueños: Lapha eTexas udla uva i- chido , isá chido , qué padre , njl. Abanye abantu abangabikho apha endikuthethe nabo, njengomhlobo wam ohlala eVenezuela, bacinga ukuba la mazwi abonakala ehlekisa njengoko ' kwakhona "iMixicanms."
Rupdaddy: Ndivile ilizwi elithi bárbaro .
Uninzi lwezifundo zam ziye zaba yiSpeyin yeRío de la Plata, eArgentina. Ndiyazi ukuba e-Uruguay, ubuncinci phakathi kolutsha, bathi de de .
UChabela: Ndiyazi ukuba e-Uruguay ngamanye amaxesha ulutsha luthi " de más ." Lawo magama afanayo, angaphantsi okanye angaphantsi, nento athetha ngayo ulutsha e-US
EMexico, ngokukodwa iTijuana, igama elithi curada lisetyenziswe ngokubanzi njengentsingiselo "epholile." Ngamanye amaxesha i- recurada iviwa. Ndayiva negama elithi chulado ngabantu abavela eMexico City.
I-OjitosLindos: Ndicinga ukuba eSpain isenzi isenzo sisetyenziswe njenge- gustar ithetha into efanayo "yokupholisa," umzekelo: " Me mola el cine " ithetha ukuba "Ndiyathanda i-cinema" okanye "i-cinema ipholile." Ndicinga ukuba oku kusetyenziswa kuphela kubantu abaselula (abaselula).
Anderwm: Ewe, ulungile. I-Molar yinto entsha. ECosta Rica naseNicaragua abantu basebenzisa i- tuane .
Ichazizwi Isigama seCinema, iI-Movie kunye neNkwenkwezi
Yintoni i-Theory Learning Learning?
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseTaranto
Ii-Jazz Instruments ezisetyenzisiweyo kwi-Ensembles